Fandosirana vonjy maika any Luminescent Mpanamboatra - Sina Luminescent rafitra mandositra vonjy maika sy mpamatsy orinasa
drafitra fialokalofana vonjy maika
Ny drafi-pamindrana vonjy taitra famirapiratra mazàna dia natao pirinty ny sarimihetsika feno hazavana, ny takelaka marevaka na ny takelaka metaly manjelatra, izay azo atao pirinty araka ny tena filana. Ny fitaovana ataonay dia manana hazavana marevaka tsara, mora atao pirinty, tsy mora malemy sy afo mandrehitra. Izy io dia afaka manome ny asan'ny indication tsy misy famatsiana herinaratra amin'ny vonjy maika, izay maitso sy ny fiarovana ny tontolo iainana.
Fantsona famafazana arabe
Fantsakanana fantsom-pifamoivoizana Ny fangatahana fitaovana ilaina amin'ny famindrana ny afo (1) Fenoy ny fenitra nasionaly 3mm 30mm × stainless steel plate, stainless steel metallurgy hafanana sy fanerena avo lenta. Ny sary sy ny soratra dia haingo sy milentika ary ny alokaloka dia rakotra fitaovana fitehirizana maivana. (2) Ny fitaovana fitahirizana hazavana dia ho fitaovana aorian'izay, izay mbola afaka manazava ny tena rehefa tsy hita na mihena ny hazavana. Ilay mamirapiratra ...
Fametahana takelaka famaingoana sy habe hanondroana ny fehezan-dalàna standard: DIN67510 Fizarana I & IV New York CityBuilding Code Reference Standards RS 6-1 ary RS 6-1A Fandroahana - ASTM D 4828 Fahafaham-po - SMP 800-C Radioactivity - ASTM D 3648 Spread Flame ASTM D635 Fotoam-pahamatorana sy fotoana fihodinana Fitaovana: foton-tsolkolafotsy pigment Basic board: board aluminium 1mm hatezerana Fahazavana: Fahazavana aorian'ny 10 min .: 270Mcd / m2 Fahazavana aorian'ny 60 min. : 13Mcd / m2 Fotoam-pitsarana: 18 ...
Fantsom-piheverana Luminescent Antislip
Ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny fizaram-bolo, azo antoka, mahatalanjona ary mitari-dalana anao amin'ny toerana azo antoka amin'ny alàlan'ny vonjy. . Ny halatra henjana dia apetraka miaraka amin'ny carborundum grit strips ary maivana mamirapiratra, tsy miparitaka ary manelatselatra ao anaty maizina dia napetraka ao anaty trano na ivelan'ny trano rehefa avy ny constr ...
tohatra mamirapiratra miendrika tohatra mamirapiratra tohatra
tohatra manjelanjelatra mihanjona haingam-pandeha vita amin'ny famoronana Namboarina, fitaovana azo ampiasaina, mety tsara ho an'ny tetik'asa marevaka anao raha sendra tampoka ny herinaratra tampoka na ny herinaratra tampoka, ny tohatra tohatra dia afaka manondro fomba fiaina ahafahana miala. Izy io dia afaka manome haingoana tsara ho an'ny tohatra, manampy ireo mpandeha an-tongotra, miaro ny antitra, ny malemy, ny marary ary ny tanora; mety kokoa ho an'ny korondran'ny hopitaly sy ny tohatra. Afaka manao haingo ny tohatra, milalao tsara sy azo ampiharina Mety ho an'ny hos ...
Miharihary ny haingam-pandeha mavitrika sy ny marika eny an-dàlana dia mihamazava ao anaty haizina tanteraka ary manazava ny lalan'ny fivoahana rehefa maizina na tsy hita ny làlambe egress. Ny singa sy ny rafitra dia mihetsika sy mandeha amin'ny alàlan'ny jiro rehefa mandeha ny jiro ary miasa tsy misy fitsabahana olombelona, ​​mekanika na elektrika na dia tsy mahomby avokoa aza ny loharanom-pahefana herinaratra sy ny herinaratra.
Namboarina vita amin'ny loko miolakolaka manidina tsipika
Long afterglow anti-skid strip dia natao manokana sy natao ho anao. Ny vokatra dia tsy vitan'ny miteraka fiasa mahazatra amin'ny haingon-trano sy haingon-trano mahazatra ihany, fa manondro ny fomba hiainana ao anaty vonjy maika ihany. Mivoatra ny fizotran'ny famokarana, fiarovana ny tontolo iainana, afo ary antiskid, ary maharitra ny loko hoso-doko ary tsy mihintsana. Hameno ny fepetra ilaina amin'ny kalitao.
Ny fambara milina fahazavana dia manazava ny lalana mankany amin'ny fiarovana
Nandritra ny krizy, setroka na mainty dia lasa ny tontolo iainana fanta-daza indrindra
misafotofoto ary mamitaka handositra trano. Ny tanjona lehibe indrindra mandritra ny lozam-pifamoivoizana dia ny famindrana ireo mpiasam-panjakana tsy hiharan-doza amin'ny filaminana. Ny fahazoana lalana hita maso tsy misy dikany dia tena ilaina amin'ny fisorohana ny tahotra sy ny fisorohana ny fahavoazana.
Fanamarihana fivoahana luminescent mipetaka amin'ny alàlan'ny vatan-javaboary / tsipika marindrano Luminescent vita amin'ny lay vonjy maika
Jiro seramika marevaka dia vokatra manjelanjelatra matihanina izay azo ampiasaina ho famantarana ny fiarovana sy ny haingon-trano. Ny fampiharana ny faritra samihafa dia mety ho eo amin'ny rindrina, gorodona, tohatra ary asan'ny zavakanto amin'ny galeriy. Ny ankamaroantsika amin'ny seram-bary marevaka dia mifanentana amin'ny fananganana izay mampifangaro ny fomba fiasa nentin-drazana miaraka amin'ny teknolojia ankehitriny. Izy ireo dia mampiseho ny vokatry ny jiro maharitra, antiseptika, mateza ary fahamarinan'ny simika. Aorian'ny fitrandrahana hazavana hita maso sahala amin'ny hazavan'ny masoandro mivantana mandritra ny 30 minitra, ary mikosoka tsy tapaka mandritra ny 8 ora ~ 12 ora. ny vokatra dia tsy vitan'ny haingo ihany no tanjona fa ny fiarovana ihany koa.
1, ravin-tsiranoka seram-baravarankely tokana
2, Basso-relievo misy sary mifangaro mirehitra
3, fantsom-baravarankely misy loko mifangaro
4, Fivoahana famantarana ho an'ny rindrina na apetraka amin'ny gorodona
Ny mampiavaka sy ny fampiharana ny sary Luminescent Ceramics Tiles
1） Seramika sarimihetsika luminescent dia vita amin'ny alàlan'ny fampidirana pigment luminescent sary amin'ny alàlan'ny famokarana keramika sy fitaratra mahazatra. Raha ampitahaina amin'ny seramika sy fitaratra mahazatra, ny vokatra dia afaka mamirapiratra ao anaty haizina taorian'ny setroka ny jiro hita maso, izay mahatonga be seramika sy fitaratra mampiasa betsaka.
2) Ny akora misy ny seramika vita amin'ny sary dia afaka mandrehitra jiro hita maso isan-karazany mandra-pahafoana, avy eo afaka mamirapiratra ao anaty haizina tsy tapaka, famerenana fika tsy voafetra miaraka amin'ny hazavana, jiro avo, izay avo folo heny mamirapiratra amin'ny hazavana nentim-paharazana nentim-paharazana. Ny fitaovana dia maimaim-poana amin'ny radioactivity, nontoxic ary tsy mampidi-doza.
4) Ny fampiharana ny seramika luminescent sary ao amin'ny trano an-trano sy ny tranom-panjakana dia tsy vitan'ny hoe manaingo sy manatsara ny trano sy ny tontolon'ny asa ihany, fa afaka mitondra fientanam-po bebe kokoa amin'ny mponina miaraka amin'ny hazavana ao anaty haizina.
5) Ireo seramika mazava ho an'ny sary dia afaka mamoaka onjam-pahazavana lava halavany, izay ahafahana manakana ny karazana tailo sy aretina. Ity toetra amam-panahy ity dia mifanaraka amin'ny ideolojia maoderina sy salama ho an'ny olona maoderina amin'ny alàlan'ny fampiharana ny vokatra any an-dakozia sy efitrano fandroana.
6) Ny seramikin'ny sary luminescent dia porofo manamarina, fanoherana ny famoronana, famonoana ny afo, fahanterana amin'ny fahanterana ary tsy misy radioactivity raha ampitahaina amin'ireo fitaovana milina biolojika hafa, izay ampiasaina betsaka any an-trano sy tranom-panjakana.
Antsoy ny tady miloko tsy misy sary
Ampidiro ny fotoam-baravarana glwo rindrina na gorodona tsy misy sary
Habe malaza 15x25, 30x30, 15x30,45x20cm sns. Max size60. (Unit cm)
Loko manelatselatra loko tokana na loko mifangaro
Ny lokon'ny andro dia fotsy miaraka amin'ny mavo
Ny loko mamirapiratra mavo-mavo na manga-maitso na lanitra-manga
Ny hateviny matevina 10mm ~ 13cm
Ny hatevin'ny vava ny 2mm - 3mm
Fahazavana araka ny DIN67510 Fizarana 1
Famonosana boaty: polistirà boaty boaty
Ny vazo manjelanjelatra misy sary dia natao ho an'ny mpanjifantsika, natao ho an'ny firavahana amin'ny rindrina, haingon-trano na vatolampy manokana na haingon-trano na alim-bary hariva sns., Azontsika atao manokana ny mamaritra ny famokarana araka ny kolontsaina nasionaly samihafa.
Vato miloko marevaka
Zava-bary marevaka & mazava voafaritra mazava: 1, mirehitra ao anaty haizina mandritra ny 6 ora mahery, dia mety ho mpitari-dalana hanehoana ny toerana azo antoka aorian'ny fahatapahan'ny herinaratra elektronika tampoka. 2, Ho fiarovana ny sisin'ny tohatra sy ny lamban-tongotra 3, ny coudl dia hamboarina amin'ny kiraro, tanjaka ary stroger noho ny adhesive irery. 4, fitsaboana sy loko maro samihafa azo alaina amin'ny safidinao: Ny haingo sy ny molotra ary ny polish na ny fasika vita amin'ny fasika sns ... ny fahasamihafana Heigh Length ary araka ny mpanjifa drawin ...